MAXAA LOO XIRAYAA MADAXWEYNAHA SUUDAAN?
Akhristeyaasha qaaliga ahoow, waxa uu yiri nebiga CSW, qofka aan ka welwelin arimaha Muslimiinta naga mid maaha. Waxa maalinkii Isniinta ee July 13, 2008da laga codsaday maxkamada dambiileyaasha xasuusaqa iyo dambiyada ba’an ee dagaalada in ay soo xiraan Madaxweynaha Jamhuuriyada Islaamiga ee Dalka Suudaan, Mudane Cumar Hassan Ahmed Albashiir. Cumar Albashiir waxa uu dalkiisa ku qabsaday inqilaab caskari ah oo uusan dhiig ku daadan bishii Juun 1989. Ka dibna waxa uu ku dhowaaqey in uu dalkiisa ku dhaqayo shariicada Islaamka. Aqoon ahaan waxa uu haystaa laba Master, mid uu ka qaatey dalkiisa iyo mid uu ka soo qaatey jaamacad ku taala dalka Malaysiya. Markii gadaal loo noqdana waxa uu ku dhashay magaalada Hoshe Bannaga oo boqol kiilomitir xaga Waqooyi Bari ka xigta caasimada Suudan, wuxuuna ku korey nolol sabool xigeen ah. Inta uusan noqon Madaxweynaha Suudaan, Cumar waxa uu u talinayey qaybta ugu xooga badan ciidamada dalka Suudaan ee sideedaad.
Lois Moreno-Ocampo oo ah ninka dacwada kusoo oogay, waxa uu sheegayaa in Madaxweynaha Suudaan uu yahay nin awood badan oo si ula kac ah u raba in uu xasuuqo seddex qabiil oo dagta dalka Suudaan koonfurtiisa. Waxana ka mid ah; Fur, Masalit iyo Zaghawa. Wuxuu xeer yaqaankani sheegayaa in uu hayo warar cad cad oo marqaatiyo leh. Waxa uuna maxkamada Heeg ka codsaday in la soo xiro Madaxweyne Cumar Albashiir. Maxkamadaani waxa ictiraafsan 106 oo kaliya Suudaan iyo Soomaaliya waxa ay ku jiraan wadamada aan ictiraafsanayn. Haddii uu Cumar Albashiir tago wadamada ictiraafsan ICC waxa lagu xirayaa meelkasta oo dalkaasi ka mid ah. Haddii ay damcaana ICCdu waxa ay ka soo xiri karaan dalka Suudaan gudihiisa, tani waxa ay la mid tahay sidii loo galay Madaxweynihii hore ee dalka Panama Manuel Noriego.
Xaqiiqada ilaah baa garan, Sudaan waxa coleystay dalalka aan Muslimka ahayn oo dhan ka dib markii uu Dr. Hassan Alturaabi uu ku dhowaaqey Suudaan in ay tahay dawlad Muslim ah. Markii ugu horeysay waxa bishii August 1989, waxa laga soo galay xagga beeraha iyo dhaqaalaha. Suudan waxa ay ku guuleystay lacagtii ay caalamku ku lahayd in ay ku gudaan muddoo aan ka badnayn lix bilood. Waxa si aad ah loo hubeeyey kuwa aadka u madaw ee daga koonfurta dalkaasi. Waxa misana colaad joogta ah looga furay dhanka dalka Jaad. Beeraha Suudan waxa ay quudin karaan shacbi weynaha ku nool Afrika oo idil, culeys dhaqaale oo la saaray awgeed waxa ay gadan waayeen juuni galayda lagu shubi jirey. Waxa ay u baxsadeen wadanka Shiinaha oo dhawaanahanba qaab farsamo ah uga faa’iideysanay Afrika oo idil.
Dr. Xasan Alturaabi iyo Cumar Albashiir waxa loogu dawgalay heshiiskii sirta ahaa oo ay la yeesheen John Garang oo ahaa hogaamiyihii jabhadaha koonfurta dalka. Waxa ay kula heshiiyeen in ay ka dhigaan Madaxweyne ku xigeen, inta badan koonfurtana in ay isu dhaqaan sharcigii ay doonaan. Sidoo kale in ay isticmaalaan dalka Shiinaha haddii ay noqon lahayd qodida tamarta iyo macdanta. Maxaa yeelay dalka Shiinaha waxa uu qaataa boqolkiiba 20%, iyaga ayaa qoda, ka dibna kala sooca markaa ka dibna suuq geeya. Halka Marayku uu qaato 20% marka uu qodo ka dib. Faransiisku wuu kala nadiifiyaa shidaalka ka dibna waxa uu qaataa 20%. Haddana waxa imanaya Ingiriiska oo waa uu suuq geynayaa halkaasna waxa uu ku qaadanayaa 20%.Markii ay galbeedka dunida ogaadaan arinkaas isaga ah, waxa ay ka codsadeen in uu Garanga arintaa ka noqdo markii uu ku adkeysteyna sida aad la socotaan waxa la qaraxday diyaaradii uu ka soo raacey dalka Yuganda.
Waxa jira qolyo u eg carab iyo Soomaali isdhalay oo dega hareeraha deegaanka Darfuur. Waa jabhad aan cidna ka amar qaadan, oo kufsada haweenka laaya ama adoonsado ragga. Khaasatan waxa ay si toos ah u ugaarsadaan dadka aan diin dhan aaminsanayn ee loo yaqaano animates. Markii ugu dambeysay oo ay dawlada Suudaan isku dayday in ay badbaadiso IDP kuwa dalkooda qaxootiga ku ah, waxa laga dilay dawlada Suudaan askar aan ka yareen 100 qof. Waxa ay dunidu isweydiisa weli, yaa ka dambeeya Janjawiid? Yaasiiya dhaqaalaha ay ku hawlgalaan? Ilaah uunbaa garan.
Kowdii July 2008 ilaa iyo hadda 106 ayaa xubin ka ah waxa loo yaqaano the Rome Statute of the International Criminal Court. 30 waa African States, 13 waa Asian States, 16 waa Eastern Europe, 22 waa Latin America and the Caribbean, iyo 25 waa Western Europe and other States.
countries A - F countries G - N countries P - Z